Short Haul, Easy Travel & ndụ Ahụmahụ bụ Nepals ozi na Malaysia
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Short Haul, Easy Travel & ndụ Ahụmahụ bụ Nepals ozi na Malaysia
Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ na -agbasa Malaysia • nzukọ • Akụkọ gbasara Nepal • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Nepal meriri nke ọma na mbipụta ọhụụ nke MATTA Fair nke emere na Putra World Trade Center (PWTC) na Kuala Lumpur site na Machị 15 ruo 17, 2019. Ndị Nepal Tourism Board duziri usoro ahụ na ụlọ ọrụ 8 sitere na njem ndị njem nke onwe. ụlọ ọrụ nke Nepal. Ngosipụta a nyere ezigbo ikpo okwu maka nkwado nke Nepal dị ka "ebe ezumike pụrụ iche maka ahụmịhe ụbọchị ndụ niile" n'etiti ndị na-azụ ahịa nke Malaysia, yana nkwukọrịta ọhụrụ banyere Nepal dị ka ebe njem si NTB ma na-enye ihe nchịkọta njem nlegharị anya na nke ahaziri iche nke ndị mmadụ. mpaghara.
Pavilion Nepal bụ ngwakọta ọdịnala na nke oge a na-eji osisi stupa rụpụta dị ka isi ihe dị mma nke ihe eji achọ mma nke Taleju Bell dị n'akụkụ aka ekpe, yana usoro ihe osise na-enweghị atụ nke na-egosipụta ngwaahịa njem nke ebe njem na azụ mgbidi. A na-ekesa ihe nkwado gụnyere broshuọ, akwụkwọ mmado, na ihe ncheta site na Nepal Pavilion, a na-egwu ihe nkiri na-egosi ngwaahịa ndị njem nlegharị anya nke Nepal iji mee ka ndị njem nwee ohere ịhụ ahụmịhe Nepal.
Ndị ọbịa gụnyere ndị njem nwere ike si Malaysia, ndị Malaysia na ndị njem njem mba ụwa na ndị na-abụghị ndị bi na Nepalis nke dị na Malaysia. Ajuju sitere na ndi nleta di iche-iche site na ebe kachasi nma ileta na Nepal rue oge kacha mma, ijeghari / ime njem, visa, nnweta, oru Halal wdg. Nepal Pavilion gakwara nleta onye nnọchi anya gọọmentị Nepal na Malaysia Mazi Udaya Raj Pandey na ndị ọzọ ndị isi nke Embassy, ​​bụ ndị ha na ndị so na-emekọrịta ihe.
Ndị otu na-ahụ maka onwe ha gosipụtara afọ ojuju na njikọ nke ndị ahịa nwere na B na C mega mere. Otu n'ime ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ nzuzo kwuru, sị, "agbakwunyere usoro nkwalite agbachapụrụ agbacha nke ọma maka iji ihe kachasị mma maka ikpo okwu, ebe atụmanya nke njem nlegharị anya dị mma sitere na Malaysia dị oke elu." Ndị Malaysian bụ ndị njem nleta na-echeghị imefu oke ma bụrụkwa ndị maara nke ọma nke Nepal dị ka ahụmịhe na mmekọrịta gara aga, dịka ndị ọrụ na-esonye. Nkwukọrịta gbasara nnweta dị mfe na Nepal na ngwugwu a rụpụtara na ọrụ impeccable dị mkpa iji kpalie ndị njem Malaysia maara nke ọma ịga leta Nepal, dị ka ha si kwuo.
Ọbịbịa ndị njem si na nnukwu uru a, ahịa dị mkpụmkpụ na-eto eto nwayọ karịa afọ site na njikọta njikọta na mpaghara Kathmandu-Kuala Lumpur. Dika onu ogugu sitere na Ngalaba Immigrashọn, ọnụ ọgụgụ ndị njem nleta si Malaysia mụbara site na 18,284 ruo 22,770, ọnụọgụ ọnụọgụ 24.5 pasent site na 2017 ruo 2018. Ihe dị ka 1.94 pasent nke ndị njem nleta na Nepal na 2018 sitere na Malaysia. Ọnwa abụọ mbụ nke 2019 ahụgoro ịrị elu na mbata ndị njem Malaysia. Site na onu ogugu ndi njem nke Malaysia na-eme atụmatụ iru ihe karịrị 14 nde site na 2021, ahịa ahụ na-ele anya na-ekwe nkwa n'akụkụ ọ bụla. Ọ bụ Nepal Airlines, Himalaya Airlines, Malaysia na Malindo Air na-ebu ụgbọ elu n'etiti Kathmandu na Kuala Lumpur.
MATTA Fair bu onye mbu nke ndi Malaysia na-enye ohere zuru ụwa ọnụ na ohere azụmaahịa iji ruo ndị njem ezumike nke mba ahụ. Ihe ngosi MATTA nwere ngụkọta nke 29 puku sq. Otu mita gụnyere Hlọ Nzukọ 1 ruo 5, 1 M na Linkway, ebe Nepal Pavilion nọ na Hall 1 dị n'akụkụ ndị ọzọ South East Asia dị ka Thailand, Korea, na Japan. Ihe ngosi ahụ nyere ndị ọbịa onyinye naanị na nhọrọ njem.
Ihe karịrị otu narị puku mmadụ si Malaysia, mba ASEAN na mba ndị ọzọ gara ngosi ahụ nke gosipụtara ihe ngosi 100 nke gụnyere ụgbọ elu, ụlọ oriri na ọicedụ ,ụ, ụlọ ọrụ, ndị na-arụ ụgbọ okporo ígwè, mgbazinye ụgbọ ala, ụlọ ọrụ ntinye akwụkwọ n'ịntanetị, kaadị / kaadị ụlọ ọrụ, ndị ọrụ njem azụmahịa, ụgbọelu ikuku, ọdụ ụgbọ elu na ihe ọ bụla ọzọ ka a na-enye site na ihe omume a, na ụlọ ọrụ ọrụ azụmahịa. Ihe ngosi a gụnyere mmemme ọdịnala nke ụmụ amaala, ibi ndụ ọtụtụ mba na-eme, asọmpi ndị ahịa, na asọmpi / mgbapụta ndị ọzọ. Onye na-ahazi ihe nkiri a bụ ndị Malaysian Association of Tour & Travel Agents.
IATA: Nchọgharị njem gosipụtara mmachi oke na May
IATA: Ndi njem kwenyesiri ike na nchekwa nchekwa, kwado ...
Qatar Airways nwere nkeji iri na ise nke ụgbọ elu Airbus A350 ya